Maqaallo | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Talo walaal oo Taabid (Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Banaadir) ku socota.
19/04/2017 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Marka hore waxaan rabaa inaan halkaan ugu soo gudbiyo Taabid hambalyo aan ugu hambalyeynayo xilka qaran ee lagu aaminay lagana dhex doortay dad badan oo dhammaan iyagu aaminsanaa inay yihiin masuuliyiin waxweyn ku soo kordhin kara maamulka magaalo madaxda dalka lana jaan qaadi kara maamulka cusub ee madaxweyne Farmaajo iyo Raisulwasaare Kheyre. Waxaana rabaa inaan halkaan kuugu soo gudbiyo talo aan kuu dooray oo aan ka dhaxlay muddaddii aan masuulka ka ahaa mid ka mid ah waaxyaha ugu muhiimsan ee maamulka Gobolka Banaadir. Waxaan hubaa haddii taladaas lagu daro qorshooyinka badan ee aad u heyso gobolka aad rabtana inaad ku horumariso in muddo kooban wax weyn loogu soo kordhin karo ummada degan magaalo madaxda dalka.
Shaqaalaha Gobolka Banaadir
Gobolka waxaa ka shaqeeya dhalinyaro aad u diyaarsan oo weliba madax ka ah waaxyo ay runtii waqti badan geliyeen aqoonna u leh shaqadooda naftootana u huray inay wax ku soo kordhiyaan dib u dhiska dalkooda kuna shaqeynayay xaalado adag oo laga yaabo in waqti dheer uu ka maqnaan jiray mushaarkooda amaba uu hadda bilo ka maqan yahay, una hayay xilkaas inay jiri doonto maalin ka fiican maanta oo ay imaan doonaan masuuliyiin dareensan baahiyaha iyo duruufaha ku xeeran shaqaalaha gobolka oo garab ku siin doona gudashada howlahooda, sienna doona qadarinta ay madaxdooda ka mudan yihiin. Waxaan marka talo kuugu soo jeedinayaa inaad ka fiirsato oo aadan ku degdegin inaad magacowto shaqsiyaad cusub oo aan howshaan garaneynin oo aad illaa maamulka waaxyaha iyo degmooyinka aad u dhiibto dad cusub. Waa muhiim in la bedelo shaqsigii lagu helo isagoo sameynayo sharci darro waana in sharciga la horgeeyaa, laakiin iska bedelkii horay u dhici jiray sxb waan kaala talinayaa haddii aad rabto horumar degdeg ah. Dheeho inta ka hartay qormadaan →
Maxey yihiin baahiyaha Dhabta ah ee dowladda cusub laga rabo inay wax ka qabato?
25/03/2017 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
In kasta oo la wada ogyahay inay wax badan u baahan tahay in waxweyn laga qabto baahiyaha iyo duruufaha maamul iyo dhaqaale ee dalka ka jira, haddana waxaa la isdhihi karaa inuu Madaxweyne farmaajo ku yimid baahi ballaaran oo ay xildhibaanada cusub iyo shacabkuba u qabaan in la helo hab maamul wax weyn ka duwan kii jiray dowladihii isaga ka horeeyay. Waxa kale oo uu isagu qudbooyinkiisa aad uga faaloon jiray intii aan la dooran, inuu haddii uu guuleysto uu aad ula dagaali doono maamul xumada iyo uruursiga dhaqaalaha dowladda oo ah mid si weyn dadka soomaaliyeed ay afka ugu hayeen muddo badan, maxaase la doorayaye laga filayaa Madaxweyne Maxammed Cabdullaahi Farmaajo?